XOG: Fahad Yaasiin & Kheyre oo diyaarinaya shirqool ka dhan ah Xildhibaan Zakariye Gaashaan – War La Helaa Talo La Helaa
Warar hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in xalay Madaxtooyada Soomaaliya ay kulan Albaabada u xiran yihiin ku yeesheen Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre iyo Ku-simaha Taliyaha Hay’adda Nabad sugida iyo Sirdoonka Qaranka “
NISA” Fahad Yaasiin Xaaji Daahir.
Inkastoo xog dheeri ah laga ogaan Karin kulanka ayaa hadana illo ku dhow Xafiiska Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya waxay Shabakadda Shaaciye.com u sheegeen in kulanka intiisa badan looga hadlay kulanka axadii su’aalaha lagu weydiinayay Madaxda Hay’adaha amniga ee ka dhacay xarunta Golaha Shacabka iyo siday Mas’uuliyiin su’aalaha la weydiinayay isku difaaceen.
Mr. Yaasiin oo Ra’iisal wasaare Kheyre u sharxay siday maalintaasi wax u dhaceen ayaa ka dib sida warar hoose aanu helay sheegayaan inuu kala hadlay arrin uu ka carooday oo uu kala kulmay mid ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka.
Wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in Taliye ku-xigeenka Hay’adda NISA uu u sheegay Xasan Cali Khayre inuu kala shaqeeyo sidii uu dacwad kaga gudbin lahaa Xildhibaan Zakariye Gaashaan oo weydiiyay Su’aal uu ka carooday.
Sidoo kale, Fahad Yaasiin ayaa Ra’iisal wasaare Khayre ka dalbaday inuu ka shaqeeyo sidii xasaanada looga qaadi lahaa Xildhibaanka si dacwad loogu soo oogo.
Xildhibaan Zakariye Gaashaan ayaa fadhigii su’aalo weydiinta Axaddii Baarlamaamka ay ku yeesheen magaalada Muqdisho oo ay ku sugnaayeen xubo uu ka mid yahay ku-simaha Agaasimaha Hay’adda NISA, si toos ah u weydiiyey Fahad Yaasiin arrimo ku saabsan Hay’adda hoggaaanka NISA xiriir la leeyahay Al-shabaab iyo sababtii xilka looga eryay taliye ku xigeenkii NISA Cabdalla Cabdalla oo sheegay in Al-shabaab ku dhex milmeen hoggaanka NISA, taasoo keentay in jawaab culus uu bixiyo Fahad Yaasiin.
Ku-simaha Taliyaha NISA Fahad Yaasiin Xaaji Dahir ayaa ka carooday su’aashaasi uu weydiiyey Zakariye oo ah xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka, isagoo ugu hanjabay inuu dacwad ku soo oogayo, sharcigana la tiigsanayo.
Soomaaliya oo shir caalami ah uga qeyb galay dalka Ruushka+(Aqri arrimaha looga hadlayo)